क्यानाडाले तथ्यलाई लुकाउन खोजेपनि मेङ वाङ झाउको मुद्दा राजनीतिक : चिनियाँ विदेश मन्त्रालय « Post Khabar
क्यानाडाले तथ्यलाई लुकाउन खोजेपनि मेङ वाङ झाउको मुद्दा राजनीतिक : चिनियाँ विदेश मन्त्रालय
Published on: 21 November, 2020 6:55 am
बेइजिङ, (रासस÷सिन्ह्वा) ः प्रसिद्ध चिनियाँ टेलिकम कम्पनी हुवावेका प्रमुख वित्तीय अधिकृत मेङ वाङझाउको मुद्दालाई राजनीतिक प्रकृतिको भएको चीनले शुक्रबार पुनः दोहो¥याएको छ ।
ट्रुडोले एसिया प्यासिफिक आर्थिक सहकार्य (एपेक) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँगको वार्तामा भनेको कुरालाई लिएर चीनको प्रतिक्रिया आएको हो । ट्रुडोले भन्नुभएको थियो, “के म क्यानाडाले आफ्नो कानुनलाई पालना गर्दा पछुतो मानौँ ।
क्यानाडाले आफ्नो निकट सहयोगीसँगको लामो समयदेखि पालना गर्दै आएको सुपुर्दगी सन्धिको पालना गर्दा पश्चाताप गरौँ ? पक्कै पनि हुँदैन ।” झाओले प्रतिक्रिया दिनुभयो, “किन क्यानाडा मात्रैै एउटा यस्तो मुलुक भएको छ जसले सुपुर्दगी सन्धिलाई पालना गर्नुपर्ने ? किन अमेरिकाका सहयोगी अन्य मुलुकले यो जिम्मेवारीलाई मान्दैनन् ।” किनकि उनीहरू अमेरिकाको भद्दा हस्तक्षेपमा सहमत छैनन् । उनीहरूले अमेरिकाको निजी स्वार्थ र सन्तुष्टिका लागि आफ्ना नागरिकको विपरितमा केही काम गर्दैनन् ।
मेङ वाङ झाउको मुद्दामा चीनको अडान निरन्तर स्पष्ट तथा एउटै रहेको झाओले बताउनुभयो । क्यानाडाले तथ्यलाई तोडमोड गरेको र वास्तविकतालाई लुकाएर क्यानाडेली नागरिकलाई नै गलत बाटोमा लान खोजेको आरोप चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले लगाएको छ ।
केही पक्ष लोकतान्त्रिक प्रणालीविरुद्ध भ्रम फैलाइरहेका छन् :प्रधानमन्त्री
पार्टिभित्र विवाद तुफान जसरी आउँछ र पानीको फोका
बाहिर प्रहरिको घेरा, भित्र नेकपा नेता सुरेन्द्र पाण्डेको
२०७७ मंसिर ८ गते साेमबारकाे राशिफल
नेकपा सचिवालय सदस्य माधव नेपाल भन्छन सुरेन्द्र पाण्डे
प्रधानमन्त्री ओली ताप्लेजुङकाे घुन्सामा, यस्तो छ कार्यक्रम